Pedyo nedhaidhi infrared inoratidza kupinza mwenje munzvimbo yepedyo infrared ye 700-2000 nm. Kubata kwavo kwakanyanya kunowanzo kubva pakubhadharisa dhayi ye organic kana simbi yakaoma. Zvishandiso zvepedyo infrared kutora kunosanganisira cyanine dhayi ine yakawedzera polymethine, phthalocyanine dhayi ...
UV fluorescent chengetedzo pigments
Kana iri pasi pechiedza chinoonekwa, UV fluorescent poda yakachenuruka kana kuti yakajeka, inonakidzwa newavelengths akasiyana (254nm, 365 nm) inoratidza imwe kana kupfuura fluorescent ruvara, Basa guru nderekudzivirira vamwe kubva mukunyepedzera. Iyo mhando ye pigment ine yakakwira tekinoroji, uye yakanaka ruvara yakavanzwa ....
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira photochromic pigment, thermochromic pigment, UV fluorescent pigment, pearl pigment, glow in dark pigment, optical interference variable pigment, dzakakurumbira dzinoshandiswa mukupenda, ingi, mapurasitiki, pendi, uye cosmetic indasitiri. Isu tinopa uye tinogadzira aya dhayi uye pi ...